Ibsa ABO: Haati Oromoo ilmaan Ishee Duula Garbummaa Bara Baraan Dhuma hin Qabnetti erguu hin Qabdu | OROMOTV
Ibsa ABO: Haati Oromoo ilmaan Ishee Duula Garbummaa Bara Baraan Dhuma hin Qabnetti erguu hin Qabdu
Haati Oromoo ilmaan Ishee Duula Garbummaa Bara Baraan Dhuma hin Qabnetti erguu hin Qabdu
Sadaasa 3, 2021
Ibsa Damee Dubartootaa Fi Daa’imman ABO
(OROMOTV) Dhaabni keenya ABO’n ijaaramuu isaa irraa ka’ee dirqama seenan isa irra kaa’e Kayyoo isaa galiin gahuuf Ummata Oromoo gulantaa hundaan dammaqsuu, kakasuu, fi ijaaruun ummatichi akka of Bilisoomsu fi Abbaa Biyyummaa isaa mirkanessuuf akka qabsaa’uu fi dhaaba adda durummaa dhaan argamu dha. Dubartootni Oromoo seenaa ummata Oromoo keessatti qooda guddaa kan qaban dha. Hawaasa Oromoo kessattis ta’e ummatoota ollaa Oromoo jiraataaturan keessatti nageenyi akka jiraatu taasisuu kessatti bakka guddaa akka qabaataa turan seenaan ragaa dha.
Yeroo mirgi ummata Oromoo sarbamuuttis qabsoo mirga ofii kabachiisuuf taasifamaa turee fi ittti jiramu keessatti ilmaan ofii ebbiftee itti hiriirsiteetti. Kana irra darbees qixxee dhiiraa hiriiruun qaamaan qabsoo bilissummaa ummata Oromoo irratti hirmaachuu fi gaggeessuun bal’inaan ni beekamti. Har’as yeroo kamiyyuu caalaa Bilissummaa ummata Oromoo fi mirga Abbaa Biyyuummaa Oromiyaaf wal’ansoo taasifamu keessatti qooda jabaa qabaachaa akka jiran ni hubatama.
Haata’u malee motummaan Bilxiginnaa yeroo ammaa kan muddama keessa jiru, ilmaan Oromoo lola isaan hin ilaallanne keessatti akka hirmaataniif waamicha deddeebisee taasisaa jiraachuun ifaa dha . Kana irraa ka’uun Haati ilmaan Oromoo deessee ilmaan ishee duula Bilissuummaa qabsoo abbaa biyyuummaf gaggeefamu irratti malee hirmaachuu hin qabdu.
Dameen Dubartootaa fi Daa’immaan ABO ‘S (DDD) sirna bara baraan lolatti ilaamaan ishee oofu kana irraa akka hin hirmaatne kan armaan gadii dhaammanna:
• Haati Oromoo duula maqaa Oromotiin sirni bilxiginnaa waamaa jiru irratti akka hin hirmaanneef ilmaan ishee gorsuu fi dhorkuu qabdi.
• Nagaa fi Tasgabbiin Biyya keenya Oromiyaa kessa jiraachuuf furmaata waaraa Dhaabni ABO labsii hundeeffama Mootummaa cehumsaa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa (MCBNO) labsuun Dhaaba KFO deggarame caasaa koree MCBNO kessatti hirmaachuun lafa qabsiisuuf jabinaan akka hojjatamuu jenna.
• Dubartoota Oromoo Hojii motummaa Bilxiginnaa keessa jirtanis ta’e humna waraanaa, polisii fi caasaa garaagaraa keessa jirtan Qabsoo Bilissuummaa Oroomotti akka makamtan fi qooda lammummaa isin irraa eegamu akka bahattan waamicha isiniif taasifna.
Dubartootni,Dargooggonnii fi ummatni Oromoo Jaarmiyaa isaa akka jabeeffatuu fi Mootummaa Cehumsaa Biyyooleessa Oromiyaa ( MCBNO) ijaarame keessatti qooda fudhachuun akka dirqama lammummaa keenya baanu waamicha goona.
Injiffannoo Uummata Bal’aaf!